NLP – Neuro-Linguistic Programming ၏ အသုံးဝင်မှု (၁၀)ချက်👉
PortfolioDecember 19, 20180Comments
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Personal Developement တစ်ကိုယ်ရည်တိုးတက်မှု အတွက် NLP ကို နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာ ဘယ်လိုမျိုး အသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ❓ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လူနေမှုဘဝမှာ NLP ကို အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားမိစေဖို့ အကြံပြုချက် (၁၀) ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်🤗 ဘယ်အရာက သင့်ကို ခြားနားစွာတိုးတက်ပြောင်းလဲ သွားစေလိမ့်မလဲ ရွေးချယ်လိုက်ပါ ✔️✔️ (၁) မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ တိုးတက်မှု (၂) မိမိ၏တစ်ကိုယ်ရည်နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုများအား စီမံထိန်းသိမ်းခြင်း (၃) နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိသောအခြေအနေတစ်ရပ်ကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း (၄) ချမှတ်ထားသော Sales Target များအထိ ရောင်းချနိုင်ခြင်း (၅) စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော presentation များကို တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း (၆) သင်၏ အဖိုးတန်စွမ်းရည်များနှင့် အချိန်ကို ထိန်းချုပ်စီမံခြင်း (၇) အောင်မြင်မှုအတွက် လမ်းညွှန်မှု ရရှိခြင်း (၈) ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ခြင်း…
Plan မရှိရင် ပလက်လန်တတ်တယ်နော်
PortfolioDecember 14, 20180Comments
အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အစီအစဉ်သေချာဆွဲထား သင့်ပါတယ် ဘယ်နေ့မှာတော့ ဘာလုပ်မယ်၊ ဘာပြီးရင် ဘာလုပ်မယ်.. ဒီတစ်ခုအောင်မြင်သွားရင် ဘယ်ကို ဆက်သွားမယ်၊ နောက်ထပ်ရလာမဲ့ အကျိုးဆက်က ဘာတွေရမလဲဆိုတာ ကို ကြိုတင်တွေးဆထားသင့်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ အစီအစဉ်တွေကိုသာ သေချာမဆွဲမိဘူးဆိုရင်တော့ အပ်နဲ့ ထိုးရမယ့် အရာလေးတွေက ပုဆိန်နဲ့ ပေါက်ရမဲ့ အခြေအနေထိရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကဲ …. ယခုစာကို ဖတ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတို့ကော ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် Plan တွေက ဘာဖြစ်မလဲ ?? ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ပြေခိုင် 🎓 Asia’s Top Business & Success Coach 🎓 1st ActionCOACH (Business Coaching) from Myanmar 🎓 1st NLP Trainer from Myanmar 🎓 1st NLP Coach Trainer from Myanmar…
မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာ ရှာဖွေရမဲ့အရာတွေ 🔍
PortfolioDecember 12, 20180Comments
ဘာတွေလဲဆိုတာ သိပြီလား? ပထမအရွယ်မှာ ပညာရှာ 📖 ဒုတိယအရွယ်မှာ ဥစ္စာရှာ 💼 တတိယအရွယ်မှာ တရားရှာ 🙇‍♂️🙇‍♀️🙏 ဒါတွေကို လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ☑️ 👆ဒီအရာ (၃)ခုက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာရော မိတ်ဆွေတို့ သတိထားမိကြရဲ့လား? 🕐အချိန်ဆိုတာ ပြန်လည်ရှာဖွေလို့မရနိုင်တဲ့ အဖိုးအထိုက်တန်ဆုံးအရာတစ်ခုပါ။ ဒီလို အချိန်အခါရှိခိုက်မှာ နေ့စဉ် သင်ယူပါ၊ လေ့လာပါ၊ စာကောင်း ပေကောင်းတွေကို ဖတ်ရှု့လေ့လာပါ📖📖 👨👩ငယ်စဉ်မှာ မိမိကိုယ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ (ပညာဆည်းပူပါ၊ စာဖတ်ပါ) မှ ဥစ္စာရှာတဲ့အခါ လွယ်ကူမယ်။ လူအများကို ဦးဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်🔜 လူအများကို ဦးဆောင်နိုင်ပါမှ🔜 ဥစ္စာရှာဖွေရာမှာ လွယ်ကူပါမှ နောက်ဆုံးအချိန် ဘဝနေဝင်ခါနီးမှာ တရားဘာဝနာကို စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အားထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်🙏 ✔️မျက်မှောက်ကာလမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတိုင်းဟာ သူ့အရွယ်၊ သူ့အချိန်အခါနဲ့သူ သင်ယူလေ့လာဆည်းပူးနေခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ ယခုအချိန်မှာ လူအများကို ဦးဆောင်နိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 📖စာအုပ်စာပေတွေဟာ လူသားတိုင်းအတွက် မိတ်ဆွေကောင်းတွေပါပဲ📖 မိတ်ဆွေတို့ကော…
PortfolioDecember 11, 20180Comments
အောင်မြင်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ အရှုံးပေးချင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် သိစိတ်နဲ့ မသိစိတ်ရဲ့ အားပြိုင်မှုတွေကလဲ ပိုမို အားပြင်းထန်လာလေ့ရှိပါတယ်။ အောင်မြင်ချင်တဲ့ စိတ်ကို လူတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားပါ သို့သော်လည်း အောင်မြင်ဖို့ လျှောက်နေတဲ့ လမ်းပေါ်မှာတင် လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးပေးချင်စိတ်တွေ ခဏခဏ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်နေသရွေ့ ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာ မကြာခဏဆိုသလို တွေ့နေရဦးမှာပါပဲ တစ်ချို့က သာမန်ဘဝလေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်နေလိုက်ကြဖို့အတွက် ကိုယ့်မက်နေခဲ့ရတဲ့ အိပ်မက်တွေကို အရှုံးပေးတတ်ကြပါတယ် လူတော်တော်များများက သူများတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေတတ်ကြတယ်။ အမှန်တကယ်က “ မိမိဘာလုပ်နေလဲဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်” မိမိမှာ ရှိနေတဲ့ အောင်မြင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒက “ကိုယ်ဘာလုပ်နေလဲ၊ ဘာတွေတွေးနေလဲ” ဆိုတာတွေကိုပဲ နားထောင်ပေးနိုင်မှာပါ။ အောင်မြင်လိုတဲ့ ဆန္ဒတွေ ထက်သန်လာပြီဆိုရင်တော့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေထဲကနေ နိုးထပါ။ ပြီးရင်တော့ ချက်ချင်း ACTION ယူပါ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်တွေဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ လက်တစ်ကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ် ချစ်ခြင်းအားဖြင့်…
Protected: Rise Up LIFE May 16, 2021
Protected: Rise Up Leadership March 29, 2021
Protected: Rise Up Business March 29, 2021
Protected: Rise Up with NLP March 27, 2021
NLP – Neuro-Linguistic Programming ၏ အသုံးဝင်မှု (၁၀)ချက်👉 December 19, 2018
No.72, Yekyaw Road, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar.
09451750051, 09763183167[email protected]
Protected: Rise Up LIFE
Protected: Rise Up Leadership
Protected: Rise Up Business
Protected: Rise Up with NLP
© 2018 Pyay Khaing , All rights reserved. Inspired By : D4B( Digital for Business )